ဗမာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ကြ Occupy Burma! အပိုင်း ၁ | The FNG
April 11, 2012 · by 21 South News	· in သတင်း ဆောင်းပါး, OP / ED.	·
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာက အတွေး အမြင်တွေ အဖြစ်အပျက်တွေကို
ရယူတဲ့ နေရာမှာ ခြေတလှမ်း အမြဲ နောက်ကျခဲ့တယ်။ တချိန်က မာ့စ်ဝါဒ၊ လီနင်ဝါဒ ကျွန်တော်
တို့ဆီကို ရောက်လာတဲ့အချိန်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း
နှစ်ဆယ်လောက်နောက်ကျခဲ့တယ်။ ကားလ်မာ့စ် အရင်းကျမ်း ရေးခဲ့တဲ့ အချိန်ထက် နှစ်ပေါင်း ၇၀
အခုတခါ ကမ္ဘာနဲ့ တဝှန်း သိမ်းပိုက်ရေး လှုပ်ရှားမှု (Occupy movement ) တွေ ပြန့်နှံ့နေတဲ့
အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း အော်လို့ ကောင်းနေတုန်း။
ကမ္ဘာပြားပြီ လုပ်နေကြတုန်း။ ကမ္ဘာမှာ အရင်းရှင်စနစ်ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေကြချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက်ပြီး အရင်းရှင်စနစ်ဆီကို သွားဖို့ စိတ်အား
ထက်သန်နေကြသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလဲ။ တခေတ်လုံးလုံး နောက်ကျဦးတော့မှာပါလား။
ကမ္ဘာပြားပြီဆိုတဲ့ သောမတ်ဖရီးမင်းတို့၊ ယဉ်ကျေးမှု တိုးတိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ ဟန်တင်တန်တို့ ကို
ကမ္ဘာမှာတော့ အပေါစား အမေရိကန် ဝါဒဖြန့်ချိရေးသမားလောက်ပဲ သဘောထားကြချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အခုထိ အသစ်ထင် နေကြတဲ့သူတွေ တော်တော်များများရှိနေတုန်း။ တ
ကယ်တော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ အရင်းရှင် စနစ်ဆီ ကူးပြောင်းမယ်ဆိုတာဟာ ဆီပူဒယ်
အိုးထဲကနေ မီးဖိုထဲ ခုန်ချသလိုသာရှိမှာပ။ အပူသက်သာရင်လည်း နည်းနည်းပဲ။ ပိုပူချင်တောင်
ကျွန်တော်တို့ အခု သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေရဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့
ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အရင်းရှင်ထမ်းပိုး၊ ကော်ပိုရေး ရှင်းထမ်းပိုးကို ပုခုံးပေါ်က
ခါချနေတဲ့ အချိန် ကျွန်တော်တို့ကတော့ အရင်းရှင်ထမ်းပိုးကို ခါးတောင်းကျိုက်ပြီး ထမ်းဖို့
ဟန်တပြင်ပြင်။ ကြည့်ပါဦး။ စစ်ကျွန်ဘဝကနေ ငွေဝယ်ကျွန်ဘဝကိုများ ကျွန်တော်တို့
သွားကြဦးမလို့လား။ စစ်ကျွန်ဘဝကနေ လွတ်ဖို့ရာ ငွေဝယ်ကျွန်အဆင့်ကို မဖြတ် သန်းဘဲ
လွတ်နိုင်တဲ့ နည်းမရှိတော့ဘူးလား။ ဘယ်သူ့ကျွန်မှမခံဘဲ ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ရတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ အရင်းရှင်အာဏာရှင်စနစ်ဆီသွားချင်နေကြတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။
အလုပ်သမား၊ လယ်သမား လူများစု ပြည်သူတွေ မွဲငတ်ပြီး လက်တဆုပ်စာ လူနည်းစု
အရင်းရှင်ကြီးတွေ ကျိကျိတက် ချမ်းသာမယ့်လမ်းကို သွားချင်နေတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။
၉၉% ကမွဲသထက်မွဲပြီး ၁% ကချမ်းသာသထက်ချမ်းသာမယ့်လမ်းကို သွားချင်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ။
တခြားသူတွေ ဟုတ်ပါရိုးလား။ ဒီနေ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ဗိုလ်လုပ်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေပါပဲ။
မှန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ စစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့ အရင်းရှင်စနစ်ဆီသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ
အသွင် ကူးပြောင်းလို သူတွေထဲမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေက ထိပ်ဆုံးကပါ။
အခု တလော ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ မကြာခဏ ပြောကြတဲ့ စကားတခွန်းရှိတယ်။
မပြောင်းလဲရင် မဖြစ်တော့ ဘူးဆိုတာကို အုပ်ချုပ်သူတွေကိုယ်တိုင် သိလာလို့ အပြောင်းအလဲတွေ
စတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ဒီစကားဟာ မမှားဘူး၊ ဒါပေမဲ့ မပြည့်စုံဘူးလို့ ဆိုရလိမ့်မယ်။
စစ်အစိုးရကို လျော့တွက်ပြီး အကောင်းမြင်လွန်းနေတယ်။
မပြောင်းလဲရင် မဖြစ်တော့ဘူး၊ ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်သွားလို့ ရေရှည် မရတော့ဘူး၊ ပြည်သူကဆက်ပြီး
ခေါင်းငုံ့ခံမှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်တွေသိလာတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ။ ဘယ်မှာ သိသွား
သလဲဆိုတော့ ၂၀၀၇ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ သိသွားကြတယ်။ သူတို့ သိပ်ကြောက်သွားတယ်။
လူထုက ပုန်ကန် တော်လှန်မှာကို သူတို့ကြောက်တယ်။ သူတို့ စစ်တပ်ထဲက ပြန်ပြီး တော်လှန်မှာကို
ပိုပြီး ကြောက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် မပြောင်းမဖြစ်၊ ပြောင်းမှဖြစ်မယ်လို့ သူတို့သိလာတယ်။ အဲဒီလို မပြောင်း
မဖြစ်တဲ့ အဆုံးမှာ စစ်အစိုးရဟာ အပြောင်းအလဲ အရိပ်အယောင်ကို စပြီး ပြလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့
ပြောင်းချင်တာက ဘယ်လို ပြောင်းချင်တာလဲ ဆိုတော့ ဖိနှိပ်တဲ့ အသွင်သဏ္ဍန်ကို ပြောင်းချင်တာဖြစ်တယ်။
ဖိနှိပ်တဲ့ စနစ်ကနေ မဖိနှိပ်တဲ့ စနစ်ဆီကို ပြောင်းချင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကနေ
ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ပြောင်းချင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ စစ်တပ်လွှမ်းမိုး ကြီးစိုးသော
အရင်းရှင် အာဏာရှင်စနစ်ဆီ ပြောင်းချင်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ခေတ်မမီတော့တဲ့ ဖိနှိပ်မှု အသွင်ဟောင်းကနေ
ခေတ်မီတဲ့ ဖိနှိပ်မှု အသွင်သစ်ဆီကို ပြောင်းချင် တာသာ ဖြစ်တယ်။
တရုတ်ကို အားကိုးပြီး ပြည်သူကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ပုံစံကနေ၊ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပကို အားကိုးပြီး
ပြည်သူကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ပုံစံသစ်ကို ပြောင်းလဲချင်နေတာသာ ဖြစ်တယ်။ အဲသလို ပုံစံပြောင်းလဲတဲ့
အခါ ဖိနှိပ်တဲ့ ပုံစံ အသွင်သဏ္ဍန်ကိုသာ ပြောင်းလဲပြီး ဖိနှိပ်မှုဆိုတဲ့ အနှစ်သာရကိုတော့ သူတို့ မပြောင်း
ချင်ဘူး။ ဒါ့အပြင် ဖိနှိပ်မှု အသွင်သဏ္ဍန်ကို ပြောင်းလဲတဲ့အခါ ဆက်လက် အခွင့် ထူးခံ မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
ဒီလူတွေပဲ ဆက်ဖြစ်နေရေး၊ သူတို့ အုပ်စုပဲ ဆက်ဖြစ်နေရေးဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ပါပဲ။
မူလဖိနှိပ်မှု အသွင်ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူသတ်စစ်အစိုးရကို ပြည်သူတွေက
လက်မခံကြတော့ဘူး။ ဒီပုံစံနဲ့ ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလူတွေကိုပဲ တံဆိပ်အသစ်ကပ်ပြီး
စစ်အုပ်စုလွှမ်းမိုးသော အရင်းရှင်အာဏာရှင်စနစ် အဖြစ် ဖိနှိပ်မှု အသွင်သစ်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်။
ပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာကို အသွင်သဏ္ဍန်အပြောင်းအလဲနဲ့ လှည့်စားပြောင်းလဲ ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
လူလက်မခံတော့တဲ့ ဖိနှိပ်မှု အသွင်ဟောင်းကနေ လူတွေကို လှည့်စားလို့ ရလောက်တဲ့ ဖိနှိပ်မှု အသွင်သစ်ဆီ
ပြောင်းချင်တာဖြစ်တယ်။ အတိတ်မှာတုန်းက စစ်အာဏာသိမ်းတော်လှန်ရေး အစိုးရကိုလူတွေ လက်မခံတော့
မဆလထောင်ပြီး လှည့်စားတဲ့ နည်းမျိုးနဲ့ လှည့်စားချင်တာဖြစ်တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ကို ပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့
အချိန်မှာ ဆိုရှယ်လစ် အတုအယောင်နဲ့ လှည့်စားပြီး ဒီမိုကရေစီကို ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီ
အတုအယောင်နဲ့ လှည့်စားဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အခုလို ဖိနှိပ်မှု အသွင်သဏ္ဍန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အတိုက်အခံတွေကြားမှာ အမြင်ရှုပ်ထွေးလာတာလည်း
အမှန်ပဲ။ တချို့က စစ်အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းတော့မယ်လို့ထင်လာတယ်။ တချို့က လုံးဝမပြောင်းဘူး၊
ဟန်ပြလုပ်ရပ်တွေလို့ထင် တယ်။ တချို့ကပြောင်းတော့ပြောင်းတယ်၊ ကောင်းမလာဘူးလို့ မြင်ကြတယ်။
ဒီလို အမြင်ကွဲကြတဲ့ အထဲမှာ ပိုဆိုးလာတာ ကတော့ “စစ်အစိုးရထဲက ပြောင်းလဲနေတာကို ရပ်သွားမှာစိုး
လို့ စစ်အစိုးရကို မဝေဖန်ကြပါနဲ့၊ ဦးသိန်းစိန် အခက်တွေ့မှာစိုးလို့ တောင်းဆို တာတွေ၊ ဆန္ဒပြတာတွေ၊
တိုက်ပွဲဝင်တာတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့၊ မတရား အဖိနှိပ်ခံကြရပေမဲ့ သည်းခံကြပါ၊ စောင့်ဆိုင်းကြပါ” ဆိုပြီး
ကိုယ့်လူကိုယ် ပြန်တားတာမျိုးတွေ၊ ခေါင်းငုံ့ခံခိုင်းတာမျိုးတွေ အထိဖြစ်လာတယ်။ အဆိုးဆုံးဖြစ်လာ
တာကတော့ ကိုယ့်အခွင့်အရေး ကိုယ် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ကြသူတွေ၊ မတရားအလုပ်ခံရလို့
တုန့်ပြန်ကြသူတွေကိုတောင် “သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ ပွဲကို ဖျက်တယ်” လို့ စွပ်စွဲ
စစ်အစိုးရအတွင်းမှာလည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပီပီသသနဲ့ ရက်ရက်စက်စက်ပြတ်ပြတ်သားသား
ဆက်လက် အုပ်ချုပ်ချင်သူတွေနဲ့ ခေတ်မီပုံစံပြောင်းပြီး “စစ်တပ်ကြီးစိုးသော အရင်းရှင်အာဏာရှင်
စနစ်ပုံစံ” နဲ့ ပြည်သူကို လှည့်ဖျားအုပ်ချုပ်ချင်သူတွေအကြား လုပ်နည်း လုပ်ဟန် ကွဲပြားမှုတွေ တွေ့
လာရတယ်။ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ပဲ ကွဲတာဖြစ်တယ်။ အခြေခံသဘောထား မကွဲဘူး။ မူမကွဲဘူး။ ဒါပေမဲ့
ဒါကိုပဲ စစ်အုပ်စုကြားမှာ အပျော့အမာကွဲနေပြီဆိုပြီး အတိုက်အခံတွေကြားမှာ အားတက်သူက အား
တက်ကြတယ်။ ငါတို့ ဘက်သား (သူတို့ အထင် )အပျော့ ကလေးတွေကို အမာက မျိုမသွားအောင်ဆိုပြီး
တကယ်တော့ စစ်တပ်ထဲမှာ အပျော့အမာကွဲနေတယ်ဆိုတာလည်း သူတို့ စစ်တပ်ကပဲ သတင်းလွှင့်ထား
တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးသတင်းလွှင့်ကြတာကတော့ အပျော့တွေလို့ နာမည်ခံထားကြတဲ့ ရထားဝန်ကြီး
ဗိုလ်အောင်မင်းတို့၊ စက်မှုဝန်ကြီး ဗိုလ်သိန်းစိုး တို့က ဗဟုတို့ သမ္မတ အကြံပေးတို့ ဆိုသူတွေဆီကနေတဆင့်
တိုးတိုးတိတ်တိတ် အလံရှူးလုပ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေအတွက် မပြောင်းမဖြစ်တဲ့ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်လာရချိန်မှာပဲ သူတို့လိုချင်တဲ့
အပေါ်ယံအပြောင်းအလဲ၊ ဖိနှိပ်မှု အသွင်သဏ္ဍန်အပြောင်းအလဲကို လုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းပေါ်လာတယ်။
သူတို့ အသွင်ပြောင်းချင်တဲ့ အချိန်ဟာ အမေရိကန်က ဆက်မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ ပေါ်လစီ ပြောင်းမယ့်ကာလနဲ့
လာတိုက်ဆိုင်နေတယ်။ အဲသလို တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ အတွက်လည်း စစ်အစိုးရ အနေနဲ့ သူပြောင်းလဲချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့
ပြောင်းလဲလို့ ရနိုင်ဖို့ အသက်ရှူပေါက် ပွင့်လာတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ စစ်အာဏာရှင်တွေ ကံကောင်းပြီး
ပြည်သူတွေ ကံဆိုးတဲ့ အချက်ပါပဲ။
စစ်အစိုးရက ဖိနှိပ်မှု အသွင်ပြောင်းပြီး လူရာဝင်ချင်တဲ့ အချိန်မှာ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပကလည်း တဘက်မှာ
စီးပွားပျက်လာတယ်။ သူတို့ အနေနဲ့ အာရှကို ခြေဦးလှည့်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်လာတယ်။ ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီ
ရတဲ့ အထိ ဆက်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ သူတို့ ဆက်ပြီး မအောင့်နိုင်ကြတော့ဘူး။ တကယ်တော့လည်း အမေရိကန်ရဲ့
ပေါ်လစီဟာ ဗမာတနိုင်ငံတည်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပေါ်လစီ မဟုတ်ဘူး။ အာရှတခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပေါ်လစီ။
အာရှမှာ တရုတ်လွှမ်းမိုးတာကို တားဆီးပြီး အမေရိကန် ဥရောပ လွှမ်းမိုးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မယ့် ပေါ်လစီ။
ဒါ့ကြောင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အာဆီယံ အစည်းအဝေးမှာ TAC ASEAN’s Treaty of Amity and Cooperation
အာဆီယံ ချစ်ကြည်ရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်ကို အမေရိကန်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်။ တချိန်
တည်းလိုလိုမှာပဲ အမေရိကန်ရဲ့ ဗမာဆိုင်ရာ မူဝါဒဟာ ချဉ်းကပ်မှုပေါ်လစီကို ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးတော့မယ်ဆိုတာ
ကြေညာလာတယ်။ ဒါဟာ တရုတ်လွှမ်းမိုးပြီး အရေခွံခွာနေတဲ့ ဗမာနိုင်ငံကို သူတို့ပါဝင်ပြီး နွှာဖို့ ခြေလှမ်းပြင်လာ
တာလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီ့ထက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်က အာရှကို သူတို့ ခြေဦးလှည့်တော့မယ်ဆိုရင် ဗမာကို
စိုးမိုးထားဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ။ ဗမာပြည်ဟာ ပထဝီ နိုင်ငံရေး အရ အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံ တနိုင်ငံလို့
သူတို့ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတ အဆက်ဆက်တို့ရဲ့ ပရောဟိတ်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ ဇဘစ်နူးဘာဇင်ဆကီ ဆိုသူက
ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ ယူရေးရှားကို စိုးမိုးနိုင်တဲ့သူဟာ ကမ္ဘာကို စိုးမိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ တွက်ချက် ဟောကိန်း
ထုတ်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ (Zbignew Brzezinski ရဲ့ The Grand Chessboard စာအုပ်ကို ကြည့်ပါ။) အဲဒီတွက်ကိန်းနဲ့
အညီ ယူရေးရှားရဲ့ အသည်းနှလုံးဖြစ်တဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာ စစ်တလင်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာ
အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာရှနဲ့ ဥရောပတို့ရဲ့ အဆက်အစပ် အသည်းနှလုံးမို့ အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်ကရော။ ကမ္ဘာ့အရေးမှာ ပထဝီနိုင်ငံရေး အရ ဗမာဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်လောက်
အရေးမပါပေမဲ့ အာရှ အရေးမှာတော့ ဗမာဟာ အရေးပါဆုံး နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်ဟာ
အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ တောင်အာရှရဲ့ အဆက်အစပ် အသည်းနှလုံးဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီး နှစ်နိုင်ငံဖြစ်သလို
အစဉ်အလာ ရန်ဘက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့နဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတယ်။ ဒါ့အပြင် အရှေ့ အလယ်ပိုင်း
က ရေနံကို တရုတ်တို့ ရယူနိုင်ဖို့အတွက် ရေနံကို ပင်လယ်ကနေသယ်ယူပြီး ပိုက်လိုင်းနဲ့ တဆင့်ခံသွယ်ယူနိုင်တဲ့
နေရာဟာလည်း ဗမာပြည်ဖြစ်တယ်။ ဒီလို သေနင်္ဂဗျူဟာ အရ အချက်အချာကျတဲ့ နေရာ အချက်အချာကျတဲ့
နိုင်ငံဟာ တရုတ်ရင်ခွင်မှာ ပျော်ပါးနေတာကို အန်ကယ်ဆမ် (US) က မနာလို မရှုစိမ့်တော့ဘူး။
ဒါ့ကြောင့် အမေရိကန်ဟာ ဗမာကို စိုးမိုးနိုင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးလာတယ်။ ဗမာကို အမေရိကန် စိုးမိုးနိုင်ရေးသည်
ပဓာန၊ ဗမာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရမရသည် သာမည ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အမေရိကန် ထိပ်တန်း သံတမန်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ပြီး အစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းပြောဆိုခဲ့ကြသလို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်း သူတို့ မူဝါဒပြောင်းတော့မယ်ဆိုတာကို
“မင်းတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် ငါတို့ ထောက်ခံခဲ့ပြီးပြီ။ မင်းတို့
အာဏာရအောင် မယူနိုင်ရင် ငါတို့ကတော့ ဆက်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဗမာစစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းရတော့မယ်၊
မင်းတို့လည်း ပေါင်းဖို့ ပြင်ပေတော့” လို့ အမေရိကန်က အချက်ပြလာတယ်။
တချိန်က တရုတ်နိုင်ငံဟာ ပြည်သူချင်းဆက်ဆံရေးကနေ အစိုးရချင်းဆက်ဆံရေး ပေါ်လစီကို ပြောင်း
တုန်းကလည်း တရုတ်ဟာ ဗမာပြည်သူတွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး၊ စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်း၊ ဗမာပြည်က
သယံဇာတတွေ စုပ်မြိုခဲ့ဖူးတယ်။ အခု အနောက်နိုင်ငံတွေ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက် ၊ ပေါ်လစီပြောင်းေ
တာ့မယ်ဆိုတော့လည်း ဗမာပြည်သူတွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး၊ စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်း၊ ဗမာပြည်ကို
ဂုတ်သွေးစုပ်မြိုဖို့ ပြင်လာပြန်တယ်။ တရုတ်ဟာ ဗမာပြည်သူတွေကို သစ္စာဖောက်ပြီး သူ့တိုင်းပြည်
အကျိုးကို သူလုပ်ခဲ့ဖူးသလို၊ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာလည်း အခု ဗမာပြည်သူတွေကို
သစ္စာဖောက်ပြီး သူတို့ အကျိုး အတွက် သူတို့ လုပ်တော့မယ်။ ကဲ..ဒီတော့ အမျုိးသားဒီမိုကရေစီ
အမျုိးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဘောင်ထဲကို ဝင်ဖို့၊ ပါတီထောင်ဖို့၊
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ အမေရိကန်က ဖိအားပေးလာတယ်။NLD ပါတီမထောင် ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ရင်
NLD ကို ရာဇဝင်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်၊ အနောက်နိုင်ငံ တွေနဲ့ စစ်အစိုးရ
တို့ ပူးပေါင်းကြတော့မယ်လို့ ဖိအားပေးလာတယ်။ အစိုးရဘက်ကိုလည်း NLD ကို သိက္ခာရှိရှိနဲ့
ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးဖို့ အမေရိကန်ပဲ ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တယ်။ NLD နဲ့
စစ်အစိုးရကို အမေရိကန်တို့ အောင်သွယ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ NLD ကိုသာ အမေရိကန်တို့
ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရကိုတော့ အမေရိကန်တို့ ဖိအားမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အခွင့်အရေးပြပြီး
မြူဆွယ် ဖျားယောင်းတာမျိုးလောက်ကိုပဲ အလွန်ဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို စစ်အစိုးရက ပြင်ပေး၊ ဖွင့်ပေးတဲ့ အခါ
စိတ်မပါ လက်မပါနဲ့ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ဆိုတဲ့အစား၊ လေးစားလိုက်နာလောက်ပဲ မပြောင်းချင်၊
ပြောင်းချင် ပြောင်းပေးခဲ့တယ်။ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဝင်မနေရ ဆိုပြီး ထပ်ပြီးတောင်
ကြပ်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ NLD မှတ်ပုံတင်နိုင်အောင် ထောင်ကျနေတဲ့သူ ပါတီက ထုတ်ပေးရမယ်
ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်ကိုတော့ ပြင်ပေးခဲ့တယ်။
အမေရိကန် စေ့စပ်ရေးကြောင့် ဗမာ့နိုင်ငံရေး ရွေ့သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့ အရွေ့ဖြစ်မလာဘူး။
ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်မလာသလဲ ဆိုတော့ အမေရိကန်ရဲ့ စေ့စပ်ရေးဟာ မမျှတလို့။ စစ်အစိုးရကို ချော့ပြီး
NLD ကို အကြပ်ကိုင်တဲ့ စေ့စပ်ရေးဖြစ်နေလို့ပဲ။
NLD ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အားကို ဘယ်တုန်းကမှ လေးလေးနက်နက် မယုံကြည်ဘူး။ NLD ဟာ
၈၈ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကနေ ပေါက်ဖွား ပေါ်ထွက်လာတာမှန်ပေမဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို မယုံကြည်ဘူး။
လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ဘယ်တုန်းကမှ ဦးမဆောင်ဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း
လူထုလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ဘယ်တုန်းကမှ တခါမှ မပါဝင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါတင်မက လူထုရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ပြီး
ချီတက်ဆန္ဒပြရဲပုံလည်း မရဘူး။ ( ၈၉ ခု ဇူလိုင် ၁၉ အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ကြည့်ပါ။) NLD နဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် အားကိုးတာဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေသာဖြစ်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့
ဖိအားသာဖြစ်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ပိတ်ဆို့ ပေးနေတဲ့ ဆန်ရှင်ကိုသာဖြစ်တယ်။ ဒေါ်အောင်
ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး သေနင်္ဂဗျူဟာ ဟာ မီဒီယာကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံတကာဖိအား နဲ့ စစ်အစိုးရကို
ဒီတော့ သူအားကိုးတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဟာ သူ့ကို ပစ်ပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ ပြန်ပေါင်းထုတ်တော့မယ်ဆိုတာ
ရိပ်မိလာတဲ့အခါ ဒေါ်စုပြာသွားတယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို မယုံကြည်တဲ့ ဒေါ်စုမှာ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း
မသိတော့ဘူး။ တခြားလုပ်တတ်တာလည်း မရှိတော့ဘူး။ ဒေါ်စု နိုင်ငံရေး သွေးဆုံးသွားတယ်။ နောက်
ဆုံးတော့ စစ်အစိုးရကို မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းရုံမှတပါး ဒေါ်စုမှာ တခြားလုပ်စရာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၀ မှာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ NLD ဟာ အခုတော့
ဘာမဟုတ်တဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို အောက်ကြေးနဲ့ ဝင်ဖို့ ပြင်လိုက်ရတယ်။ မောင်မောင်ခေါ်လို့ ဗျာ
မထူးခဲ့တဲ့ NLD ဟာ အောင်ကျော်ခေါ်တော့မှ ဘုရားထူးရပါတော့မယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘဲ လွှတ်တော်နာယကသာဖြစ်တဲ့ ခင်အောင်မြင့်က စိတ်မပါလက်မပါ
၉၀ ရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ် တခွန်းပြောရုံလေးနဲ့ ဒါလောက်ဆိုရပါပြီ၊ ကျမတို့ ကျေနပ်ပါပြီဆိုပြီး
ဒေါ်စုဟာ ပြာပြာသလဲနဲ့ ၉၀ ရလဒ်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ၉၀ ရလဒ်ကို
ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက် ဈေးပေါပေါနဲ့ ထုတ်ရောင်းလိုက်သလဲ။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို
ဈေးမကိုင်ရဲ ဈေးမဆစ်ရဲသလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ဒေါ်စု သိပ်ဗိုက်နာနေလို့ပါ။ အမေရိကန် မရှိရင် ဘာမှ မလုပ်တတ်လို့ပါ။
ဒါ့ကြောင့်လည်း တနိုင်ငံလုံးလူထုက အပ်နှင်းထားတဲ့ သမိုင်းဝင် ၉၀ ရလဒ်ကို ပါတီတခုလုံး ရဲ့ သဘောထား၊
ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထားကို တခွန်းတပါဒမှ မရယူပဲ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းကို လူပေးသလို ပေးပစ်ခဲ့တာပါ။
ဒီလိုနဲ့ တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူတွေ ယုံကြည်ကိုးစား အပ်နှင်းခဲ့တဲ့ ၉၀ ရလဒ်ဟာ ထဘီဟောင်းတထည်ကို စွန့်ပစ်
သလို စွန့်ပစ်တာခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာအောင် ဗမာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ၊ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှား သူတွေကို
ထောက်ပံ့ပြီး အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေက ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားသူဆို
သူတွေကို ခေါ်ပြီး အမေရိကန် ပုံစံ တွေးခေါ်ပုံ တွေးခေါ်နည်းကို သင်ပေးခဲ့တယ်။ အခုအမေရိကန်က
ဗမာပြည်ကို ဝင်ပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ ပြန်ပေါင်းထုတ်ချင်တဲ့ အချိန်မှာ ဗမာအသားအရေရှိပြီး အမေရိကန်
ဥရောပ အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ အဲဒီလူတွေဟာ အသုံးဝင်လာတယ်။ အဲဒါကတော့ ဗဟုတွေပဲ။ သာမန်အားဖြင့်
ဗမာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ဗဟုလို ငမျောက်၊ ငခြောက်တွေကို အရေးလုပ်နေရိုး ထုံးစံမရှိဘူး။
စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ နိုင်ငံခြားသားကို မုန်းလွန်းလို့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တောင် နိုင်ငံခြားသူနဲ့ လက်ထပ်ထား
တဲ့သားကို အမွေပြတ်ကြေညာရဖူးတယ်။ အခု နိုင်ငံခြားသူတွေနဲ့ လက်ထပ်ထားသူတချို့ ပါဝင်တဲ့ ဗဟုတွေ
၊ တချိန်က သူတို့ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဲဒီဗဟုတွေကို သူတို့ အနေနဲ့ အရေးလုပ် စကားပြောနေတာဟာ
အမေရိကန် မျက်နှာကြည့်ပြီး ပြောနေတာ ဖြစ်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ အမေရိကန် ထောက်ခံမှုရခဲ့တဲ့ ဗဟုတွေကတော့ အမေရိကန်ကို
ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်းကြီးလို့  မှတ်ထင်ထားခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ အမေရိကန်တွေရဲ့
မပြောင်းမလဲတဲ့ တသမတ်တည်း ပေါ်လစီဟာ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူး၊ အရင်းရှင် ကော်ပိုရေး
ရှင်းကြီး တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ပေါ်လစီပါပဲ။ အမေရိကန် သမ္မတနဲ့
ဆီးနိတ်အမတ် တွေဆိုတာကလည်း အားလုံးဟာ အဲဒီ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေမှာ အကြီးအကျယ်
ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ထားကြ သူတွေချည့်ပဲ။
ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ပေါ်လစီကတော့ တသမတ်တည်း မဟုတ်ကြောင်း၊
အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ရှေ့နောက်မညီခဲ့တာတွေရှိကြောင်း သက်သေ အထောက်အထားတွေ အများ
အပြားရှိခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ဟာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အခါ ဒီမို
ကရေစီကို ထောက်ခံတယ်။ အဲဒီကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားက အာဏာရှင်တွေနဲ့မှ
ကိုက်ညီတဲ့ အခါမှာတော့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်တာပဲ။ အဲသလို အထောက်အထားတွေ
အများကြီးရှိခဲ့ ရှိနေတုန်းပဲ။ လယ်သမား အလုပ်သမား ငါးသိန်းကျော်ကို ကွန်မြူနစ်တံဆိပ်ကပ်ပြီး
သတ်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ဆူဟာတို အစိုးရကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးခဲ့တာဟာ အမေ ရိကန်ပဲ။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ အဖောက်ပြန်ဆုံး အာဏာရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျကို ထောက်ခံမှု
အပြည့်ပေးနေတာ ဟာလည်း အမေရိကန်ပါပဲ။ ဆဒန်ဟူစိန်ကို တချိန်ကထောက်ခံခဲ့တာ၊ အီဂျစ်
အာဏာရှင် ဟော်စနီ မူဘာရက်ကို အာရပ်နွေဦးမတိုင်ခင်အထိ တလျောက်လုံး ထောက်ပံ့ပေးနေခဲ့
တာလည်း အမေရိကန်ပဲ။ အတိတ်ကာလမှာ တာလီဘန်ကို ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တာလည်း အမေရိကန်ပဲ။
အယ်လ်ခိုင်းဒါး အဖွဲ့ကို မွေးထုတ် လေ့ကျင့် ပေးခဲ့တာလည်း တခြားမဟုတ်၊ အမေရိကန်ပါပဲ။
ဒီတော့ ယေဘုယျသဘောကို ပြောရရင် နိုင်ငံကြီးတွေဟာ သူတို့ အကျိုးရှိရင် ဘယ်သူမှ အာဏာရှင်နဲ့
ပေါင်းဖို့ ဝန်မလေးဘူး။ ဗမာပြည်သူတွေကို သစ္စာဖောက်ဖို့လည်း ဝန်လေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။
အမေရိကန်ရော တရုတ်ရော နှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာ ကမ္ဘာလှည့်ပြီး သူတို့ကိုယ်ကျိုးရှာကြတဲ့ အခါ ဘယ်သူမှ
သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံက ပြည်သူတွေအကျိုးကို တချက်မှ ငဲ့ကွက်ကြည့်တာ မဟုတ်ဘူး။ အနောက်နိုင်ငံ
ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရှဲလ် က နိုက်ဂျီးရီးယားမှာ၊ ယူနီယံကာဘိုက်က အိန္ဒိယ ဘိုပါးလ်မှာ၊
တိုတယ်ဖီနာက ပြင်သစ်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးမှုတွေဆိုတာကလည်း
ကမ္ဘာကျော်ပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံထဲက ကျောက်မီးသွေးတွင်းတွေရဲ့ အလုပ်သမားတွေ အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး
ချိုးဖောက်မှုဆိုတာကလည်း ကမ္ဘာကျော်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်က ပိုဆိုးတယ်။ အမေရိကန်ဟာ နိုင်ငံတကာကို
လက်နက်နဲ့ ကျူးကျော်ဖျက်ဆီးခဲ့တာ မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် များတယ်။ တရုတ်မှာ အဲသလို လက်နက်နဲ့
ကျူးကျော်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ဒီနေ့အထိ မရှိသေးဘူး။ ဒီနေရာမှာ တရုတ်က အမေရိကန်နဲ့ စာရင်တော်သေးတယ်။
(ဒါပေမဲ့ နောင်မှာ တရုတ်လည်း ဒါမျိုး ရှိမလာလို့တော့ အာမမခံနိုင်။ နောင်မှာ တရုတ်စစ်ရေးအင်အား ကြီးလာ
တဲ့ အခါ ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုမပြောနိုင်။)
This article was originally published in the here
← စစ်ပြန် ဂျော်န်မက်ဒဲဗစ် ပိုင်ငွေ ဒေါ်လာ (၂၅၀၀၀) အမေရိကန် ဘဏ်က ပြန်ပေးပြီ
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် စုနမိ အန္တရယ် သက်ရောက်မှု မရှိ ၊ ငလျှင် ငယ်များ ဆက်လက်လှုပ်နေဆဲ (Update) →
16 responses to “ဗမာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ကြ Occupy Burma! အပိုင်း ၁”
ကျော်ဇေယျာလင်း June 26, 2012 at 3:11 pm · ·
Aung Htut June 10, 2012 at 9:14 pm · ·
နွားကွဲရင်ကျားဆွဲတာခံရမှာပါ၊ ကွဲတဲ့နိုင်ငံအတော်များများလဲဘက်ပေါင်းစုံကအဆွဲခံနေရပါတယ်၊မကွဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလဲဘက်ပေါင်းစုံက ခွဲဘို့၊ဆွဲဘို့ကျိုးစားနေကြတာပါ၊
zwe zwe June 9, 2012 at 12:54 am · ·
Stupid shit, Currently, average Burmse age must be least in world. What ever system is better than current situation. Did you ever look for burmese homeless people life. They do not have human dignity to suicide themself and live lower than animal.
kyaung thar May 24, 2012 at 2:10 pm · ·
လက်တွေ့ လက်တွေ့လို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေရော.. ဘာတွေများလုပ်နေကြပါလဲခင်ဗျာ… လုပ်ဆောင်မှုတိုင်း မှာသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်.. ဒါကိုနားလည် ထားရမယ်..မကန့်ကွက် ရဘူး… သူရေးထားတာတွေကို ခင်ဗျားတို့သိပါသလား..မသိလို့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်..နိုင်ငံရေးဗျ.. အဆိုးတွေများများမြင်မှ များများပြင်နိုင်မှာ..မှတ်သားသင့်တဲ့ အရာတွေကိုမှတ်သားထားနိုင်ရမယ်။ ဒါမှတစ်လမ်း
than win May 21, 2012 at 7:15 pm · ·
No matter how it may be at least it can light us in alternative way of thinking. Thanks
aung April 25, 2012 at 4:43 pm · ·
စိတ်ညစ်လို့ အရက် ကိုသောက်တယ် အ၇က်သောက်တော့ သိပ်စိတ်ညစ်တယ် အကြောင်းရှာတော့ခေါင်းမှာချာချာလည် တစ်ခုထဲ သိတယ် လောကကြီးမှာ လေ ပိုက်ဆံမရှီရင်မျက် နှာ အင်မတန်ငယ် ……
Harry April 21, 2012 at 7:42 pm · ·
A little knowledge very dangerous.
hoseki April 20, 2012 at 3:50 pm · ·
open minded trip!
gtubebook April 16, 2012 at 5:09 pm · ·
သိပ်မှန်တာပေါ့ . . . ကျုပ်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တစ်ခုမှာ ကျွန် သွားခံနေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဘဲ . . . . အရင်းရှင် စနစ်ရဲ့ ဒါဏ်ကို ကောင်းကောင်း သိမြင်ခံစားနေရတာပေါ့ဗျာ . . . .
သိပ်ကို မှန်ကန်ခိုင်မာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဖေါက်ထွက်ဆန်းသစ်တဲ့ အခြေခံလူတန်းစား အတွေးအခေါ်တစ်ရပ်အဖြစ် ရေးသားထားတဲ့ ဆောင်းပါးဘဲ . . . .
တစ်ခု အကြံပေးပါရစေ . . . အားလုံးကို . . . . အခုဆောင်းပါးကော နောက် အပိုင်း(၂)ကိုကော ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေစုတို့ကော မြန်မာပြည်က အနောက်နိုင်ငံများရဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေကို အလကားရမယ်လို့ ထင်နေကြတဲ့ သူအားလုံးကို ဖြန့်ဝေ သိမြင် ဖတ်စေချင်ပါတယ် . . . .
တစ်ခုပြောခဲ့မယ်နော် . . . ပိတ်နှောက်ချုပ်ချယ်ထားတာက အချိန်တန်ရင် ထမင်းလာကြွေးလိမ့်မယ် . . . စားစရာမရှိလို့ ငတ်မသေဘူးနော် . . . သို့ပေမယ့် . . . လွတ်လပ်စွာ စိတ်တိုင်းကြ အားလုံး ချယ်လှယ် ကြစတမ်းဆိုရင်တော့ . . . . ချမ်းသာသူ၊ ပညာ ထိပ်တန်းတတ်သူများသာ ထမင်းနပ်မှန်အောင်စားရလိမ့်မယ်နော် . . . ကျန်သာမန်ပြည်သူများကတော့ အဲဒီ့တော့ကျမှ တစ်နပ်မှကို စားရတော့မှာ မမဟုတ်ဘူး . . . ဘာလို့လဲဆိုတော့ . . . အရင်းရှင်စနစ်မှာ ရေတောင် အလကားမရတော့လို့ဘဲ . . . . မယုံလို့၊ လက်မခံလို့ သိချင်ရင် စိန်ခေါ်တယ် . . . . လာခဲ့ပါ အနောက်နိုင်ငံတွေ မဟုတ်တောင် စင်္ကာပူလောက်ပေါ့ . . . အလုပ်လာလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . . . . ထမင်းတစ်နပ် ဘယ်ကနေစားရတယ်ဆိုတာသိသွားစေရမယ် . . . ကိုယ့်နိုင်ငံက ထမင်းတစ်နပ် အရသာနဲ့လုံးဝမတူပါ . . . . သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ အရင်းရှင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အကျိုးကြောင်း အရသာပြောင်းသွားတာပါ . . . ဒါတောင်မစားနိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားတဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေ နေ့စဉ်ရှိနေတယ်နော် . . . . အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငတ်သေတဲ့သူ မကြားဘူးသေးပါ. . . . .
freddie July 16, 2012 at 5:48 pm · ·
ပိုက်ဆံမရှိ၊ ပညာမတတ်သူတွေ ငတ်သေကုန်တော့ ဆင်းရဲသားတိုက်ဖျက်ရေး အောင်မြင်တာပေါ့ဟ
maung maung myanmar3April 16, 2012 at 5:50 am · ·
ဘာတွေလျောက်ေ၇းထားတာလဲ မင်းကကောနိုင်ငံခြားမှာနေပြီး တိုင်းပြည်ကိုဘာများကောင်းအောင်လုပ်ပေးလို့လဲ နိုင်ငံခြားမှာ သူများပေးစာကမ်းစာစားလို့ဝတော့ အမေ၇ိကန်မကောင်းဘူးပြောတယ် အ၇င်တုန်းကမြန်မာပြည်နဲ့အမေ၇ိကန်မတည့်တော့ အမေ၇ိကန်ကောင်းတယ်ပြောတယ် အေးအေးနေပြီးပေးစာကမ်းစာစားနေပါ မြန်မာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေကမင်းတို့ထက်ပိုပြီးနားလည်တယ် တိုင်းပြည်ကိုသူတို့တတ်နိုင်တာလုပ်နေတယ်
moelayy April 14, 2012 at 4:03 pm · ·
စာတွေဖတ်တာများ ပြီး အစွန်းတွေရောက်၊ သွေးနားထင်ရောက်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးလွန်းပြီး မဝေဖန်သင့်တဲ့သူတွေကိုဝေဖန် ထားတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လို့ပဲ ယူဆတယ်။ ပွဲဆူအောင်လုပ်ပြီး နာမည်လေး လူသိများလာအောင် လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ ဒီအချိန်မှာ မလုပ်သင့်ဆုံး အရာပါ။ တစ်သက်လုံး ထိုင်ပြီး စာတွေဖတ်၊ ဝေဖန် လေကန်တာတွေ ခပ်ညံ့ညံ့ လူတွေအလုပ်ပါ။ ကွန်မြူနစ်မှိုင်းတွေမိပြီး အရင်းရှင် အရင်းရှင် နဲ့ ကြောင်တောင်တောင် အယူအဆ တွေ မြောင်းထဲ ပစ်လိုက်ပါတော့။ ဗမာပြည်ကို တကယ်ချစ် တယ်ဆိုရင် ကောင်းအောင်လုပ်မဲ့သူတွေ ဘက်က နေ ရပ်တည်သင့်ပါပြီ။ ဟိုကောင်လဲ မကောင်းဘူး ဒီကောင်ကလဲ ငချာ၊ မင်းကရောလို့ မေးခဲ့ရင် ငါလဲ မလုပ်တတ်ဘူး ဆိုတဲ့ လူစားမျိုးတွေက ဗမာပြည်တိုးတက်ဖို့ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်နေရာမှာမှ သုံးစားလို့ မရဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောပေါက်ပြီး တတ်နိူင်တဲ့ဘက်နေ၀င် ကူပါ လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အပြောတွေ လျှော့ပြီး အလုပ်နဲ့ သက်သေလေးပြပါ ဆောင်းပါးရှင်။
Jalaihtaw April 14, 2012 at 4:12 am · ·
ဖတ်သမျှတွေထဲမှာ ထိမိတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဆောင်းပါးပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအုပ်စုက မကောင်းလို့ အပြောခံရတယ်ဆိုတော့ ဒီဆောင်းပါးကို ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အပိုင်း (၂) ကို စောင့်ဖတ်ပါမည်။ အားပေးသည်။
Neo April 13, 2012 at 8:29 am · ·
လိုသလို ဆွဲရေးပြီး တကယ့်လက်တွေ့နဲ့ ကင်းကွာတဲ့ ကောက်ချက်တွေရယ်၊ အမှန်တဝက်စွက်ထားတဲ့ အမှားတွေကို ပွဲထုတ်လာတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ မျှတတဲ့ အမြင်တစ်ခုနဲ့ ရေးရင် အတော်ဖတ်လို့ ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို မျှတသယောင်ယောင်နဲ့ အစွန်းရောက်တဲ့ အယူအဆမျိုးတွေ ခုချိန်မှာ အထူးဆင်ခြင်သင့်တယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
kyaung thar May 24, 2012 at 2:12 pm · ·
အမှန်ကိုပြောပြတာကို လက်ခံနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် ဆရာရေ့
outsider April 12, 2012 at 4:18 am · ·
Very good article, good presentation and brave imagination. Most of the people , unfortunately, will hate this article.